I-China DL-Methionine CAS 59-51-8 yeeGrade zokutya (iFCC / AJI / UPS / EP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
I-DL-Methionine CAS 59-51-8 yeBanga lokutya (i-FCC / AJI / i-UPS / i-EP)
Igama lemveliso:: I-DL-Methionine
I-DL-methionine (Isifinyezo seMet) yenye yee-amino acid ezili-18, kunye nenye yee-amino acid ezisibhozo kwizilwanyana nasemzimbeni womntu. Isetyenziswa ikakhulu njengezongezelelo zokutya kwiintlanzi, iinkuku, iihagu kunye neenkomo ukuze kugcinwe izilwanyana kunye neentaka zikhula zisempilweni. Inokuphucula ukufihlwa kobisi lweenkomo, kuthintele ukubakho kwe-hepatosis. Ngaphandle koko, inokusetyenziswa njengamayeza e-amino acid, isisombululo senaliti, ukumiliselwa kwesondlo, iarhente yesibindi sokukhusela, unyango lwesibindi sokuqina kunye nehepatitis enetyhefu.
I-DL-methionine ingasetyenziselwa ukudibanisa iivithamini zonyango, izongezo zesondlo kunye nezongezelelo zokutya.
I-DL-methionine yenye yezona zinto ziphambili zokufakwa kunye ne-amino acid. I-DL-methionine ine-anti-fatty liver function. Ukuthatha lo msebenzi, iivithamini zokwenziwa ezinokusetyenziswa njengamalungiselelo okukhusela isibindi.
Njenge-amino acid ebalulekileyo emzimbeni womntu, i-DL-methionine inokusetyenziswa njengesongezelelo sesondlo kukutya nakwinkqubo yokulungisa izinto ezinjengeemveliso zekhekhe lentlanzi.
Yongezwe kukutya kwezilwanyana, i-DL-methionine inokunceda izilwanyana zikhule ngokukhawuleza ngexesha elifutshane kwaye malunga ne-40% yokutya kwazo kungagcinwa.
Njengengxenye ebalulekileyo kwiprotheni synthesis, i-DL-methionine inefuthe lokukhusela kwimisipha yentliziyo. Kwangelo xesha, i-DL-methionine inokuguqulwa ibe yiTaurine yisalfure, ngelixa iTaurine inefuthe elicacileyo le-hypotensive. I-DL-methionine ikwanomsebenzi olungileyo wokukhusela isibindi kunye nokuchithwa kwetyhefu emzimbeni, ngenxa yoko isetyenziswa kakhulu kunyango lwezifo zesibindi ezinje nge-cirrhosis, isibindi esinamanqatha kunye ne-hepatitis yentsholongwane engapheliyo. Inesiphumo esihle kakhulu.
Ebomini, i-DL-methionine iphezulu ekutyeni okufana nembewu kajongilanga, iimveliso zobisi, igwele, kunye nolwandle ulwandle.
icacile kwaye ayinambala
Egqithileyo I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yoFidi lweBanga
Okulandelayo: L-Isoleucine CAS 73-32-5 kwiBakala lokutya (AJI USP EP)
I-L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine kwiBakala lokutya, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ukutya kwezilwanyana,